Dia mankany amin'ny Picos de Europa | Vaovao momba ny dia
Dia mankany amin'ny Picos de Europa
Matetika isika dia mieritreritra ny handeha lavitra amin'ny fialan-tsasatra, ary tsy hahatsapa ireo toerana mahafinaritra sy mahaliana izay ananantsika fiara vitsivitsy monja. Iray amin'izany ny Park National Picos de Europa mahafinaritra. Raha mbola tsy nitsidika azy ianao dia mila mihoatra ny faran'ny herinandro, satria valan-javaboary midadasika izy io izay misy ny tsangambato mankany amin'ny faritra voajanahary tsara tarehy, hetsika ary fialamboly.
Ity dia iray amin'ireo fitsangatsanganana izay mety indrindra ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Manintona ny rehetra ny habaka voajanahary, ary ny fanatanjahan-tena any ivelany amin'ny lalan'ny dia an-tongotra dia tsara ho an'ny rehetra. Ny fahitana azy ireo tanteraka dia saika tsy azo tanterahina, satria valan-javaboary mitazona ny faritanin'i Asturias, León ary koa Cantabria. Izy io no valan-javaboary faharoa mitsidika indrindra an'i Espana rehetra, aorian'ny Teide National Park any amin'ny nosy Canary.
Amin'ity indray mitoraka ity dia hiresaka zavatra sasany tena ilaina sy inona no ho hita rehefa mitsidika ny Picos de Europa. Na izany aza, ny fahaverezana any amin'ireo tanàna kely any an-tendrombohitra, voahodidin'ny natiora sy ny fiadanam-po, dia zava-doza hatrany. Vonona ve ianao hahita ity valan-javaboary tsara tarehy ity?
2 Lakes of Covadonga
3 Làlan'ny fitandremana
Ity tanàna ity dia iray amin'ny malaza indrindra ary iray amin'ireo be mpitsidika indrindra rehefa mandeha any amin'ny Picos de Europa. Cangas de Onís dia ao amin'ny Principality of Asturias. Toerana misy tantara maro izy io, izay ahitanao azy vestiges ny zavakanto Romanesque amin'ny tranobe, toy ny Parador nohavaozina, izay fiangonana toy izany. Ity tanàna ity dia nanatri-maso karazana tantara sy fandresena rehetra, saingy io no lasa faritany tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Betsaka ny toerana mahaliana amin'ity tanàna ity, fa ny tena ilaina dia ny Tetezana Romanina, izay misy tohany marindrano maromaro ary eo afovoany dia misy fanontana ny hazofijaliana Victory. Io dia iray amin'ireo tandindon'ny tanàna, izay asehon'ny tsirairay amin'ny sariny. Toerana hafa izay azo jerena dia ny Hermitage of Santa Cruz, namboarina tamina mpivaro-tena taloha izay mbola voatahiry tsara ao anatiny, na ny Casa Dago amin'ny fomban'ny tendrombohitra, izay misy ny toerana fampahalalana momba ny valan-javaboary.
Ity dia iray amin'ireo fitsidihana tadiavin'ny rehetra atao rehefa mitsidika ny valan-javaboary. ny farihy Covadonga toa an'i Enol na La Ercina Voahodidin'ny tontolo voajanahary sy tendrombohitra izy ireo izay mahagaga. Ny farihin'i Enol no lehibe indrindra amin'izy rehetra, ary ao amin'ny halaliny dia misy ny Virjin'i Covadonga. Raha vantany vao tonga ianao, dia afaka mitsangatsangana mankany Mirador de la Reina, hahita ny faritra manontolo ao Cangas de Onís amin'ny fomba fijery be panoramic. Tsarovy fa tsara kokoa ny mandeha amin'ny andro mazava tanteraka, satria mety hisy zavona betsaka, ary amin'ity tranga ity dia tsy afaka mankasitraka antsipirian'ny farihy isika.
Raha vao any amin'ny farihy dia mila mandeha any amin'ny Toerana masin'i Covadonga, izay voahodidin'ny natiora, eo amin'ny Tendrombohitra Auseva. Ny Holy Cave dia toerana fivahinianana masina, ary ny tempoly sy ny kompana dia naorina nanodidina azy tamin'ny 1887. Ity lava-bato ity dia nosokirina tamin'ny vatolampy, ary eo an-tampon'ny riandrano. Tao no nisy ilay olo-masina mpiaro an'i Asturias nandritra ny 1.300 XNUMX taona mahery. Mila miakatra tohatra lava ianao vao ho tonga any, ary afaka jerenao koa ny tranombakoka misy sary sokitra, sary hosodoko ary mpanefy volamena izay mampiseho ny fivoaran'ny fitoerana masina.
Mety tsy ho fantatry ny rehetra io zotra io fa a iray amin'ireo làlana fitsangantsanganana malaza indrindra. Ireo tsy tia an'ity fanatanjahantena ity dia tsy afaka manadino azy. Eo anelanelan'ny tanànan'i Caín sy Poncebos izy io. Fantatra amin'ny anarana hoe 'Throat Divine' izy io, ary làlana manokana tokoa satria voasokitra ao anaty vatolampy. 11 kilometatra ny halavany, ary ao no ahitanao ny hantsana ka hatrany amin'ny tetezana isan-karazany tsy maintsy hiampitana. Misy lava-bato maromaro voasokitra ao anaty vatolampy, ary tonga hatrany amin'ny tanànan'i Kaina ilay lalana.
Ao amin'ity faritra ao amin'ny Picos de Europa ity dia misy fitsangatsanganana notarihina tamin'ny Jolay ka hatramin'ny Septambra, ireo volana nahitana fidiranana lehibe indrindra. Notanterahina isan'andro ireo zotra, miaraka amina olona 25 farafaharatsiny, ary amina làlana maro, izay ny Lakes of Covadonga, Cabrales, Liébana ary Sajambre / Valdeón.
Ity Natural Park ity dia toerana hahitana natiora feno zavamaniry sy zavamananaina ihany koa. Misy karazana legioma mihoatra ny roa arivo voasoratra ao amin'ny a Ala karazana Atlantika, ravina be, izay misy avy amin'ny hazo terebinta mankany amin'ny beech. Nandritra ny lohataona dia nanjary fipoahana loko io.
Voaro ny biby ao amin'ity valan-javaboary ity ary misy karazana sasany ao a programa fanarenana. Hita avy amin'ny voromahery volamena ka hatramin'ny voromailala, voromailala, amboadia na saka dia. Ny iray amin'ireo biby mampiavaka azy indrindra dia ny chamois, ary misy bera volontany ihany koa, na dia sarotra aza ny mahita azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Dia mankany amin'ny Picos de Europa
Ny fitsangatsanganana tsara indrindra avy any Tokyo
Tohodrano telo Gorges, fahagagana sinoa